Vashandisi, zviitiko uye mabasa muMautic. Iyo chikuva chekushambadzira | Linux Vakapindwa muropa
En kuongorora kwedu kumenu yekumisikidza Mautic, iyo yakavhurika sosi yekushambadzira task automation chishandiso, Ino inguva yekugadzira vashandisi, kugovera mabasa uye kukonzera zviitiko kuburikidza newebhu webhu
1 Vashandisi, mabasa uye zviitiko muMautic
2 Iwo mabasa
3 Iwo maWebhuok
Vashandisi, mabasa uye zviitiko muMautic
Vashandisi vanopihwa kuvanhu kuti vakwanise kuwana Mautic nepo mabasa achiona kuti ndeapi maMaut mabasa evashandisi anogona kuwana
Mushandisi manejimendi ibasa remushandisi mushandisi.
Mutungamiri anogona kugadzira mushandisi nekupedzisa zvese zvinodiwa, achiisa siginecha kana zvichidikanwa, uye nekupa zita rekushandisa nephasiwedi.
Dzimwe sarudzo dzekumisikidza parameter inguva yenguva uye mutauro wakasarudzika wemushandisi mutsva. Wese mushandisi akagadzirwa ane nyika mbiri; rakaburitswa (rinokwanisa kubatanidza) kana kusaburitswa (risingakwanise kubatanidza)
Kuti tigadzire basa nyowani tinoenda kune inoenderana chinhu mune yekumisikidza menyu. Ipapo tinobaya pane Nyowani.
Kana iyo 'Yakazara Sisitimu Yekuwana' switch ichiitwa, account yemutungamiriri inogadzirwa iyo ine yakanyanya mwero yekuwana kune ese Mautic sarudzo.
Aya maakaunzi anofanirwa kuve mashoma uye kupihwa vashandisi vakavimbika. Iwe haugone kumisikidza mvumo nekuti unotova nazvo zvakazara.
Iyo sarudzo ndeyekupa tsika mvumo yezvimwe zvinhu. Izvi zvinoitwa nekubata switch yekuzara kuwana kune ino sisitimu uye kuenda kune Mvumo tebhu kuvaka basa.
Sarudzo dzemvumo ndedzinotevera:
Wona: inobvumira vashandisi vane iri basa kuti vaone chikamu cheMautic.
Hora: Mushandisi anogona kuita shanduko kuchikamu cheMautic.
Gadzira: Inobvumira vashandisi kugadzira zviwanikwa zvitsva mune yakatarwa chikamu cheMautic.
Delete: Mushandisi ane iri basa rakapihwa anogona kudzima zviwanikwa kubva muchikamu cheMautic.
Shambadzira: Inopa mukana wekuita kuti zviwanikwa zviwanikwe.
Yakazara: Govera vashandisi mvumo yapfuura.
Kune mvumo yematanho inoenderana nezviwanikwa zvakagadzirwa nemushandisi naiye uye zvakare zvine hukama neizvo zvakagadzirwa nevamwe
Izvo: izvi zvinobvumidza vashandisi vane iri basa kuona / kugadzirisa / kudzima / kutsikisa zvavo zviwanikwa muchikamu chino cheMautic, asi kwete izvo zvakagadzirwa nevamwe
Vamwe: Mukuwedzera kune zvavo zviwanikwa, mushandisi anogona kugadzirisa izvo zvakagadzirwa nevamwe.
Kune mvumo yematanho ane chekuita nekugona manejimendis:
Manage: inobvumira vashandisi vane ino basa kudzora zviwanikwa munzvimbo ino yeMautic (semuenzaniso, gadzirisa tsika masango kana plugins)
EKune mvumo yematanho ane chekuita neminda iyo inogona kugadziriswa muchikamu cheVashandisi:
Minda yakatarwa: bvumira kana kuramba vashandisi nebasa iri kuti vagadzirise minda yakatsanangurwa muchikamu cheVashandisi (semuenzaniso, Zita, Username, Email, Musoro)
Zvese - Izvi zvinobvumidza vashandisi vane iri basa kugadzirisa ese minda inoenderana neVashandisi chikamu
Webhook ndeyekufona kweHTTP iyo inokutendera iwe kuti utumire data kubva kune imwe application kune imwe. Mukuronga callback inodaidzwa kune chiitiko "A" icho chinoshandiswa sekupokana kweimwe basa "B". Kana "B" ichidaidzwa, inoita "A".
Mautic inosimbisa nhevedzano yezviitiko zvatingaite kuburikidza newebhu webhu inoenderana nekusika, kugadzirisa uye kubvisa zviitiko.
Maitiro ekugadzira webhook anotevera:
Mune iyo yekumisikidza menyu, tinya paWebhooks.
Mune chimiro tinozadza zita uye tsananguro pfupi yewebhu webhu.
Isu tinonama iyo POST URL yekushandisa mumunda unoenderana.
Isu tinosarudza chiitiko icho chinozodzingwa kuburikidza newebhu webhu.
Dzvanya paTumira Bvunzo Payload kuti uone kuti zvese zvinoshanda zvakanaka.
Tevere, isu tinopa iro chikamu uye toona, kana zvinopfuura chiitiko chimwe chakasarudzwa, munzira ipi yavachaitwa.
Kuti upedze, tinya paApply uye Sevha & Vhara.
Zvese izvi zvinogona kurira kunge zvakafuta uye zvisinganzwisisike, asi, kana tikatarisa iyo mienzaniso inoshanda, tichaona kuita kwakawanda kwechishandiso ichi,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vashandisi, zviitiko uye mabasa muMautic. Iyo chikuva chekushambadzira
Vivaldi, Akashinga uye DuckDuckGo vanoti "kwete" kuFooC yeGoogle